यौन आनन्दको माध्यम हस्तमैथुन , हस्तमैथुनको मापन छैन
हस्तमैथुन प्राय:जसोले गर्ने एउटा प्राकृतिक अभ्यास नै हो । कसैले घमन्ड गरेर मसँग यो बानी छैन भन्यो भने ऊ झूट बोलिरहेको छ वा उसले आफ्नो यौनेच्छा जबर्जस्ती दबाइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । हो, नेपाली समाज अझै पनि यौनप्रति त्यति उदार भैसकेको छैन । त्यसो भन्दैमा यौनजन्य गतिविधि हुँदै नहुने होइन । कतिपय अवस्था निकै गम्भीर परिणाम ल्याउने गरी यौन गतिविधि भैरहेकै छ तसर्थ यौनलाई लाजको विषय मानेर होइन कि अरूसँग यथोचित छलफल परामर्श गरेर आफ्नो मनलाई, बानीलाई वशमा राख्न सक्नुपर्छ । साप्ताहिकबाट
चितवनमा भेटिएका अचम्मका व्यक्ति फुर्साङको यस्तो छ दर्दनाक कथा (भिडियो सहित)
युवतीको करामत ! न जागिर, न व्यापार, तर घन्टाको १२ लाख
पोखरामा भेटिए एकै पटक १८ बाजा बजाउने मानिस ! यस्तो छ कला (भिडियो)
एउटा यस्तो गाउँ जहाँ बाँदरकै कारण युवतीले बिहे गर्न पाएका छैनन्
बिश्वको सबै भन्दा ठुलो शिव लिङ्ग जुन एउटै ढुङ्गाबाट बनेको छ
पत्नी निदाएपछि हरेक रात !
विश्वकै सबैभन्दा बूढी वेश्या !
लामोतिर युवतीको मन
गान्धि आफ्नै भतिजी सगँ नाङ्गै सुत्थे,” गान्धीबारे आएका विवादहरु “
रेस्टुरेन्टले खेलाडीको खुराक देखेर आउन नै प्रतिबन्ध लगायो
आफ्नो जुँगा स्याहार्न दैनिक ३ घण्टा
दुई बोत्तल पानी लिंदा महिला वेटरलाई ११ लाख टिप्स